Vokatra fiarovana manokana | Fandraisana an-tanana hafa fotsiny ho an'ny fonon-tànana PE / Latex / Nitrile / PVC
Ilay mitarika Mpanondrana vokatra
Manome serivisy fijanonana iray izahay, mpanjifa an-jatony no matoky anay hanome azy ireo vokatra avo lenta
Misy ny famokarana faobe!
Vokatra fiarovana manokana
Ny orinasa Unidus (HK) dia manome vokatra fiarovana avo lenta amin'ny vidiny mirary. Ny fanaovanay vokatra azo antoka amin'ny vidin'ny tsena marobe fa tsy mampandefitra ny kalitao no tanjontsika hatrizay. Ny vokatray dia mora azon'ny mpanjifa isaky ny ilaina izy ireo, ny tontolo iainana henjana indrindra misy azy ireo.
Mandrosoa bebe kokoa
Hatsarao ny fiarovana
Amin'ny maha mpanamboatra vokatra fiarovana any Shina anay dia manome vahaolana fiarovana sy fahasalamana feno izahay hanatsarana ny fiarovana ny toeram-piasanao. An'aliny ny olona niantehitra tamin'ny vokatray mba hahatonga ny toeram-piasan'izy ireo ho azo antoka kokoa ary misy dikany tonga lafatra amin'ny orinasa izany.
Ahenao ny vidiny
Manampy amin'ny fitazonana ny vidinao ambany izahay amin'ny alàlan'ny fanolorana vidiny mifaninana amin'ny vokatray. Manome vahaolana tsara indrindra izahay hampiasana ny vokatra mety hanatanterahana ny zavatra takian'ny mpanjifanao nefa tsy mila mandany vola fanampiny amin'ny fividianana ny vokatra tsy mety.
Acree dia manana orinasa mpamokatra entana any Shina ary tambajotram-fanaparitahana midadasika manerana ny firenena. Manolotra mihoatra ny 3000+ karazana fitaovana fiarovana manokana (PPE) sy fitaovana izahay.
Ampitomboy ny famokarana
Rehefa azo antoka ny fiarovana ny mpiasa ao amin'ny tontolon'ny toeram-piasana dia avo kokoa ny vintana hampitomboana ny vokatra sy ny fahombiazany. Ny mpiasao dia hahatsapa ho matoky tena ary afaka mifantoka amin'ilay lahasa eny an-tànana fa tsy miahiahy momba ny fiarovana azy ireo sy ny fiainany mandritra ny asany.
Fanandramana mihoatra ny 10 taona amin'ny fanamboarana Personal Protective Equipment (PPE), manamboatra eo ambanin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana voamarina amin'ny ISO 9001: 2015 Standard. Vokatra kalitao voamarina amin'ny fenitra iraisam-pirenena samihafa ary tohanan'ny ekipa R&D matanjaka ho an'ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokatra.
Hamaly ny fanontanianao izahay ao anatin'ny 24 ora. Notohanan'ny ekipa manam-pahaizana momba ny fiarovana efa za-draharaha hanome fanohanana ara-teknika tsara kokoa sy ekipa mpamolavola trano hanampy anao amin'ny vokatra namboarina.
Mahazo amin'ny tsara indrindra
Izahay dia manome ny vahaolana tsara indrindra amin'ny lafiny fiarovana miaraka amin'ny vokatra sy serivisy. Manantona anay hahazo ny fampiasam-bola tsara indrindra hiantohana ny tontolon'ny asa tsy misy lozam-pifamoivoizana.
Alatsinainy- zoma: 8: 00-18: 30 Hrs
(Telefaona hatramin'ny 17:30 Hrs)
Sabotsy - 8: 00-16: 00
Birao foibe: FLAT C, 9 / F, TRANO FANDRESENA, NO.72-76, LALANA AN'NY ALOHA BOKY SHEUNG WAN, HONG KONG
Manana valiny lehibe isika
Anontanio anay na amin'inona na amin'inona
Hafiriana no nanaovanao vokatra PPE
Manomboka amin'ny mpanamboatra fonon-tànana PE, aorian'ny fivoaran'ny 10 taona mahery, ankehitriny dia manome karazana vokatra PPE mihoatra ny 30 izahay.
Ekenao ve ny OEM kaomandy kely?
Eny, afaka mamolavola sy manamboatra araka ny takian'ny mpanjifa izahay. Manaiky OEM misy habetsahana kely izahay, manantena ny hiara-hiasa miaraka.
Hanao fanaraha-maso kalitao alohan'ny fandefasana tsirairay ve ianao?
Eny, isaky ny baiko tsirairay dia manao fanaraha-maso amin'ny fomba famokarana samihafa izahay, ary hanana ny ekipanay QA manokana hijerena kalitao alohan'ny fandefasana.
Inona no antoky ny kalitao amin'ny fandefasana entana?
Hamaly ny fitarainan'ny mpanjifa izahay ao anatin'ny 12 ora, ary tompon'andraikitra amin'ny olana kalitao rehetra izahay.
Inona ny teny andoavanao vola?
Ekeo ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny T / T (Famindrana banky), L / C amin'ny fahitana (baiko betsaka) ..
Ahoana ny amin'ny ora fandefasana anao?
Matetika izahay mandefa baiko vaovao ao anatin'ny 30 andro, fa mandamina filaminana ihany koa ao anatin'ny fotoana fohy.
Ahoana no hahazoako teti-bola?
Normall isika dia afaka manome tolotra miorina amin'ny fampahalalana toy ny sary an-tsary na ny toetran'ny vokatra. Azonao atao ihany koa ny mahazo base quote amin'ny sary, azafady tadidio fa rehefa misy teny nalaina tahaka izao dia zonay ny manitsy ny vidiny raha toa ka aharihary ny fampahalalana tsy fantatra ao aoriana.
Ahoana raha tsy mahita ny vokatra mety tadiaviko avy amin'ny tranonkalanao aho?
Tianay ho loharano feno ho an'ny vokatra PPE. Miasa izahay hanome vahaolana manampy ny mpanjifanay hahomby. Acree koa dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ireo vokatra PPE amin'ny fiaraha-miasa aminao. Ary amin'ny tranga tsy fahita firy fa tsy izahay no loharano tsara indrindra, hanampy anao izahay hanondro anao amin'ny lalana marina.
Hisoratra anarana ny Newsletter anay
Eto ianao dia hahazo ny fampahalalana vaovao momba ny vokatra sy ny vidiny
Copyright 2012 - 2022 Acree | Zo rehetra voatokana | Powered by Acree
Ianaro ny fomba nanampianay ireo marika ambony 100 hahazo fahombiazana.